Rikoodhadii La Diiwaangeliyey, Xaqiiqooyinkii Ciyaarta, Xiddigii Garoonka Iyo Messi Oo Lagu Daray Laacibiintii Ku Fashilmay Ciyaartii Real Madrid vs Barcelona - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaRikoodhadii La Diiwaangeliyey, Xaqiiqooyinkii Ciyaarta, Xiddigii Garoonka Iyo Messi Oo Lagu Daray Laacibiintii Ku Fashilmay Ciyaartii Real Madrid vs Barcelona
Rikoodhadii La Diiwaangeliyey, Xaqiiqooyinkii Ciyaarta, Xiddigii Garoonka Iyo Messi Oo Lagu Daray Laacibiintii Ku Fashilmay Ciyaartii Real Madrid vs Barcelona
April 11, 2021 Abdiwahab Ahmed Wararka Ciyaaraha Maanta, Wararka La Liga 0
Real Madrid ayaa hoggaanka horyaalka LaLiga la wareegtay kaddib markii ay Barcelona kaga badisay 2-1 kulan ka dhacay garoonka Estadio Alfredo Di Stefano.
Karim Benzema ayaa goolka hore ku dhaliyey cidhib, waxaana mid kale raaciyey Toni Kroos, halka goolka madiga ahna uu Barcelona u dhaliyey Mingueza oo taariikhda isku qoray.
Rikoodhadii laga diiwaangeliyey ciyaarta:
Real Madrid ayaa taariikh samaysay, waxaanay u ahayd markii u horreysay ee tan iyo 2007-08 ay xilli ciyaareed gudihii labadii kulanba ka badiso Barcelona. Ciyaartii hore ee Camp Nou ayay Real kusoo adkaatay 3-1, halka ay caawana 2-1 guushu ku raacday.
Lionel Messi ayaa barbarreeyey rikoodhka safashada ee Sergio Ramos oo hore u ahaa laacibka ugu safashada badan kulankan El Clasico. Labadooduba waxay hadda ciyaareen min 45aad.
Messi ayaan wax goolal ah ka dhalinin Real Madrid tan iyo intii uu Spain ka tegay Cristiano Ronaldo, waxaana u dambaysay ciyaartii ay 2-2 ku kala baxeen dhamaadka xilli ciyaareedkii 2017-18, intii ka dambaysay oo dhan habaar ayaa kaga dhacay kulankan.
Karim Benzema ayaa toddobadii ciyaarood ee ugu dambeeyey ee horyaalka, waxa uu dhaliyey goolal, waxaanu noqday ciyaartoygii afraad ee Real Madrid ah ee qarniga 21aad toddoba ciyaaarood oo LaLiga ah shabaqa soo taabta. Ruud van Nistelrooy, Cristiano Ronaldo iyo Gareth Bale ayaa ka horreeyey.
Toni Kroos ayaa dhaliyey laaggii xorta ahaa ee ugu horreeyey 316 kulan oo uu u saftay Real Madrid. Lix gool oo laad xor ah ayuu u dhaliyey intii uu joogay Los Blancos.
Barcelona waligeed kumay guuleysanin horyaalka LaLiga iyadoo labadii kulan ee labada garoonba ay Real Madrid ka badisay, waana taariikh qoran iyo niyad-jab ku habsaday Barca.
Barcelona have never won LaLiga after losing both league games against Real Madrid 👀
Madrid stretch lead in Clásico winshttps://t.co/3jPmFxkWLD pic.twitter.com/mmiSnCpYOn
— AS English (@English_AS) April 10, 2021
Toni Kroos ayaa loo doortay xiddigii ugu fiicnaa garoonka, waxaana uu dhaliyey gool, isagoo fure u ahaa bandhigga kooxdiisa oo uu difaacis iyo hal-abuur intaba ku waday.
Xiddigan ayaa qiimaynta kulanka ka helay darajada 8, laakiin waxay ka sinnaayeen afar ciyaartoy oo kale oo kooxdiisa ahaa, haddana isaga ayaa ka hor qaaday xiddignimada.
Casemiro ayaa isku qoray laacibiinta fashilmay ee garoonka, waxaana ciyaartiisii sarraysay ee halganka ahayd qariyey casaankii uu qaatay dhamaadkii ciyaarta. Qiimayntii ciyaarta ayuu ka helay darajada ugu hoosaysa oo ahayd 5.
Waxakale oo fashilka ku jiray dersin ciyaartoyda Barcelona ah, waxayse Casemiro isku mid ahaayeen Dest iyo Dembele, halka Lionel Messi iyo ciyaartoyda kale ee Barcelona aanay iyaguna waxba dhaamin oo ay darada 6 ka heleen qiimaynta kulanka.
Barcelona labada ciyaartoy ee ugu fiicnaa waxay ahaayeen Mingueza iyo Jordi Alba, waxaana soo raacay Antoine Griezmann oo beddel kusoo galay.
Beddelka: Asensio (5), Marcelo (6), Odriozola (6), Isco (5), Mariano (5).
Beddelka: Griezmann (7), Braithwaite (5), Trincao (5), Sergi Roberto (6), Moriba (6).